Okraina: Fisarahana Amin’ny LiveJournal Rosiana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2014 19:30 GMT
I Frank ilay osy Biby famantaran'ny LiveJournal aloha dia … hafa.
Frank la mascotte LiveJournal chèvre est en quelque sorte … différent.
Nanambara [ru] i Igor BigDan (ibigdan [ru]), iray amin'ireo bilaogera Runet malaza indrindra omaly fa hiala amin'ny maha-talen'ny LiveJournal Okraina azy izy manomboka amin'ity volana Aprily ity. Noho ny fitantarana nampifanditra nataony mikasika ny politika ivelan'ny Rosiana nandritra ny krizin'i Krimea no antony lehibe nandraisany izany fanapahan-kevitra izany.
Bilaogera mpampiala-voly aloha no tena ahafantarana an'i Bigdan ary miaiky malalaka [ru] izy fa dika-petaka (copier-coller) avy amin'ny loharano hafa antserasera avokoa ny 90%-n'ny asa-sorany. Vao haingana i Bigdan no niresaka momba ny fanoherany ny fanakambanana an'i Krimea an'i Rosia. Ka toa niteraka fifandirana teo aminy sy ny vondrom-mpitantanana ny orinasa (Livejournal) izany. Hoy izy nanoratra [ru]:
Na ny tenako na ny mpitantana ny orinasa dia samy sahiran-tsaina noho ny toe-draharaha amin'ny maha-“mpiasa aminà orinasa Rosiana tsy mitsaha-mitsikera ny fanakambanana an'i Krimea amin'ny Rosia”. Tsia, tsy misy idiran'ny sivana ity – amin'ny maha-bilaogera be mpanaraka ahy, tsy mbola nobaikoana mikasika izay tokony hosoratako sy tsy hosoratako aho. Kanefa tsy bilaogera fotsiny ihany aho fa mpiasa ao amin'ny orinasa goavana Rosiana […] izay mety hampisy olana na hampidi-doza ho an'ny orinasa ny fitantarana ampahibemaso tsy malina na tsy voahevitra ataon'ny mpiasa . [..] Tsy afaka hanasivana ny tenako aho na hitsahatra tsy hanoratra lohahevitra politika ao amin'ny bilaogiko. Izany indrindra no antony hisafidianako hijanona ho bilaogera mahaleotena.
Na dia mibilaogy amin'ny teny Rosiana aza izy, olom-pirenena Okraniana i Bigdan, ary ny LiveJournal dia eo ambany fanarahamason'ny orinasa tsy miankina Rosiana SUP Media (Rambler-Afisha-SUP ny anarany ankehitriny) nanomboka tamin'ny nividianan'ny Six Apart Inc azy tamin'ny taona 2007. Na dia nofaritan'i Bigdan tsara aza fa tsy sivana no antony nialàny, mazava tsara amin'ny fanambarany fa misy ny teritery haniva-tena ataon'ireo lehibeny izay mahatonga azy tsy te-hanohy ny fibilaogina ao amin'ny orinasa. Ny tahotry ny sivana no tena nanosika ny ekipa mpandika lahatsoratra tao amin'ny Lenta.ru niala tamin'ny volana lasa, raha nosoloina ny tompon'ny habaka ny lehiben'ny famoahan-dahatsoratra. Toa fifanojoan-javatra fa iray ihany ary olona iray ihany ny tompon'ny Lenta.ru sy ny LiveJournal: ilay Rosiana mpanefoefo Alexander Mamut.
Nanambara i Bigdan fa tahaka ny tsy hisy mpisolo izy amin'ny maha-talen'ny LiveJournal Okraina azy. Ny toerana izay niandraketany hatramin'ny taona 2012, dia miandraikitra ny “fampandrosoana ny servisy, fampitomboana ny lazan'ny bilaogy, fahaizana manokana ny faritra sy ny sehatra ara-barotra Okrainiana iray manontolo.”